Afrika: Qaliinnada dhalmada “50 jeer ayay ka halis badan yihiin kuwa dalalka horumaray” | Hangool News
Afrika: Qaliinnada dhalmada “50 jeer ayay ka halis badan yihiin kuwa dalalka horumaray”
Tirada hooyooyinka ku geeriyooda Afrika marka lagu sameeyo qalliinka dhalmada ayaa 50 jeer ka badan kuwa dalalka horumaray, sida lagu sheegay daraasad uu sameeyay joornaalka caafimaadka ee The Lancet.
Waxaa daraasadda lagu sheegay in 200-dii boqol ee haween ah ay middood ku geeriyooto qalliinka amaba kaddib isla marka qalliinka lagu sameeyo. Marka loo barbardhigo, dhimashada dhalmada kaddib ayaa dalka UK 10,000 ee haween ah waxaa geeiyoota hal ka mid ah.
Tirada dhimashada la xiriirta qalliinka dhalmada, aad ayay ugu yar tahay inta badan dalalka horumaray.
Qiyaastii 20% ka mid ah haweenka Afrikaanka ah ayay dhibaatooyin la soo dersaan marka qalliinka lagu sameeyo, taas oo saddex jeer ka badan tan Mareykanka.
Qaar ka mid ah sababaha laga hortagi karo ee dhimashada ka dhalata qalliinka dhalmada ayaa waxaa ka mid ah dhaawac gaara ilmo-galeenka, dhiig-bax yimaada kahor ama inta qalliinka lagu guda jiro, iyo dhibaatooyinka la xiriira cirbadda suuxisada.
Base qorayaasha warbixinta kuma baaqayaan in la yareeyo qalliinka dhalmada. Bruce Biccard, oo ah bare wax ka dhiga University of Cape Town, ayaa aaminsan inay tahay in Afrika laga sameeyo qalliinno badan oo noocaas ah.
Wuxuu sheegay inay laga maarmaan tahay in bukaannadu ay helaan qalliinno looga hortagi karo dhibaatooyinka dhalmada ka dhasha, balse sidoo kalena ay muhiim tahya in la horumariyo oo laga fekero badbaadada bukaannada.
Ilaa 3,800 haween ah oo ku kala nool 22 dal oo Afrika ka tirsan ayaa lagu soo qaatay daraasadda, taas oo noqoneysa daraasaddii ugu weyneyd ee lagu baaro dhibaatooyinka ka dhasha dhalmada ee qaaradda Afrika.